Sidina mora amin'ny fiaramanidina, mividiana tapakila amin'ny vidiny tsara indrindra! ?
Find ny vidiny tsara indrindra amin'ny sidina ary miaraka amin'ny fiantohana rehetra misaotra ny motera fikarohana mora vidina anay.
Fikarohana sidina mora vidy
Saingy misy safidy hafa amin'ny Internet, noho izany dia manolotra anao hiditra amin'ny tranonkala fikarohana sy fampitahana sidina lehibe izahay:
destinia: Noho ity motera fikarohana ity dia afaka mahita sidina amin'ny vidiny lafo sy miaraka amin'ny antoka feno isika. kitiho eto
Mazava ho azy fa: Ilay motera fikarohana ao amin'ny hotely malaza dia manolotra fitaovana anao hahazoana sidina tena mora vidy. kitiho eto.
Skyscanner: Iray amin'ireo motera fikarohana be mpampiasa indrindra ary manana ny lazany tsara indrindra amin'ny fahitana ny vidiny mora indrindra. Raha te hahita ny fomba fiasa ianao dia mila kitiho eto.
Lufthansa, seranam-piaramanidina alemanina ary izay lehibe indrindra any Eropa. Ao amin'ny tranokalany no ahitanao ny sidina tsara indrindra ao anatin'ny tolotra lehibe omeny. kitiho eto.
eDreams, iray amin'ireo masoivoho mpandehandeha lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, manolotra sidina isan-karazany amin'ny vidiny tsara indrindra. Fandriho miaraka amin'izy ireo ny sidinao miditra eto.
Isaky ny andro fialantsasatra na fialantsasatra manakaiky dia tonga amintsika ny miala amin'ny fahazarana. Inona no fomba tsara kokoa noho ny mahafantatra toerana hafa. Raha taona maro lasa izay dia kamo isika, satria voatery nanao dia lavitra nandritra ny andro maromaro, anio dia tsy izany intsony. Misaotra ny fiaramanidina, ho tonga amin'ny toerana alehantsika isika amin'ny fotoana fohy. Raha amin'ity tombony lehibe ity dia ampianay ny sidina mora izay afaka hitantsika amin'ny tranonkala, dia efa manana ny ampahany amin'ny fialantsasatra voalaminay isika.
Torohevitra tsara indrindra hahitana sidina mora vidy
Mahaiza mandanjalanja: Iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny fikarohana fifanarahana momba ny sidina, dia rehefa tsy manisy daty manokana isika. Izany hoe, fantatsika rehetra fa ny vanim-potoana avo dia mifandraika amin'ny volana aogositra sy ny fetim-pirenena. Noho izany, raha tsara vintana ianao afaka mandositra any ivelan'izy ireo, dia azo antoka fa hanangona betsaka kokoa noho izay eritreretinao amin'ny tapakilan'ny fiaramanidinao ianao.
Tapakilan misaraka: Indraindray, manofa tapakila tsy ny miverina sy mivoaka no vahaolana tsara indrindra. Ho hitantsika ny tahiry rehefa mitahiry misaraka ny tapakila. Mazava ho azy, voalohany indrindra dia mila mijery akaiky ianao, satria tsy ny orinasa rehetra no manana an'io fika io.
Ny mizana: Na dia ny fiatoana amin'ny dia Mety hanakorontana izy ireo, amin'ity tranga ity, mety ho famonjena antsika koa izy ireo. Izany dia satria mihena be ny vidiny.
Ny ora: Tsy isalasalana fa mety hisy fiantraikany amin'ny paosintsika koa ny ora. Raha tsy maika amin'ny andro iray manokana ianao dia azo antoka fa tsy ho sakana koa ny fotoana. Azonao atao ny mametra ny anao sidina mora vidy raha misafidy zavatra voalohany indrindra ianao amin'ny maraina na amin'ny alina. Indraindray dia somary ambany kokoa ny vidiny. Mila mijery fotsiny ianao!
Janoary, Febroary ary Novambra lasa ny volana mora vidina. Noho izany, afaka mandeha mijery ny androny foana ianao ary manao famandrihana amin'izany fotoana izany. Mazava ho azy, raha manana andro tsy iasana ianao dia afaka manova kely foana io fialan-tsasatra ao an-tsainao io.
Ahoana ny famandrihana sidina an-tserasera
Mamandrika sidina an-tserasera, Iray amin'ireo lahasa azon'ny tsirairay atao izany, na dia tsy manana hevitra be momba ny Internet aza. Ho fanampin'izay, afaka mamonjy mpanelanelana, miandry ary fomba hafa ianao. Tsy heverinao ho mendrika ve izany?
Voalohany indrindra, ny tsara indrindra azontsika atao dia ny mandeha a mpitady sidina tahaka ireo navelanay ho anao tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity. Eo isika dia afaka misafidy ny daty sy ny toerana tiantsika hotsidihina ary hahazo andiana safidy maromaro izahay, baikoina amin'ny vidiny sy ny orinasan-sidina. Asa kely dia kely izay hananantsika eo alohanay afaka segondra vitsy.
Amin'ny maha milina fikarohana anao dia azonao atao ny mampiasa Skyscanner sy Rumbo na Destinia, ankoatry ny hafa. Izy rehetra dia hanamora anao ny vidiny tsara indrindra amin'ireo orinasa malaza indrindra. Tsara tanana ianao !.
Raha vantany vao manana ny safidintsika isika dia manomboka ny fampiharana tsotra amin'ny fahalalana rahoviana isika no tsy maintsy mamandrika. Rehefa mikasa ny hanao vakansy izahay dia tsy afaka tonga sy miakatra. Tsia, satria mila manitsy kely ny vidiny isika. Mba hanaovana izany, ny zavatra tsy maintsy fantatrao dia, amin'ny ankapobeny, fito herinandro eo ho eo alohan'ny vidin'ny tapakila dia ho 10% mora kokoa. Mazava ho azy, raha maika isika, dia tsy maintsy fantatrao fa ny tapakila amin'ny andro fialan-tsasatra dia mety nitombo hatramin'ny 30% ny vidiny.
Raha vantany vao nanao ny dingana lehibe amin'ny fikarohana ianao, misafidy ary mifantina toerana halehanao. Ankehitriny dia mitoetra ihany izy io mba hanao ny famandrihana ihany. Vita, handefa anao mailaka fanamafisana amin'ny mailaka izy ireo izay nomenao. Hiseho eo ny nomeraon'ny tapakila sy ny kaody famandrihanao.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny famandrihana sidina an-tserasera?
Fantatsika fa misy maro tombony azo amin'ny famandrihana sidina an-tserasera. Tsy isalasalana fa ny fampiononana dia zavatra hiaraka amintsika foana. Tsy mitovy ny mandeha manatona masoivoho iray ary mandany maraina iray maraina any noho ny hipetraka tsara eo amin'ny seza ao an-trano. Mazava ho azy, ho fanampin'izany, manana olon-kafa tsy maintsy tononina isika.
vaovao: Mazava ho azy fa misimisy kokoa ny fampahalalana. Izany dia noho ny motera fikarohana azonao atao ampitahao amin'ny orinasa samihafa, ary koa mankafy toerana maro kokoa sy ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao.
Tsy misy fandaharam-potoana: Aza manahy raha mandany tontolo andro ianao miasa ary rehefa tonga ianao, ny masoivoho fitsangatsanganana mihidy. Miaina, miala sasatra kely, ary velomy ny solosaina. Ho hitanao eo izay rehetra tadiavinao. Azonao atao ny maka tahaka azy na mandinika azy ny ampitso raha te hijery vaovao ianao.
vidin'ny: Raha ny fanamarihanay, zavatra iray izay mampanahy anay hatrany ny vidiny. Amin'ity tranga ity dia tsy hisy ny mpanelanelana ary afaka mihaona amin'izy ireo foana isika mihoatra ny tolotra mahasoa. Mazava ho azy, tadidio fa tsy maintsy miantoka hatrany ny vidiny farany ianao, raha vao nampiana ny sarany mifanaraka amin'izany. Na izany aza, azo antoka fa ho mora vidy kokoa amin'ny Internet.
Sidina mora mankany London
Raha tianao izany mandeha any LondonAvy eo dia tokony ho fantatrao fa raha te hanana sidina mora ianao dia mila manao famandrihana eo amin'ny fito herinandro alohan'ny dia. Amin'izany dia afaka mitahiry manodidina ny 20% amin'ny vidiny ianao. Mazava ho azy, noho izany, manoro hevitra foana izahay fa manomboka mijery haingana araka izay tratra ary ambonin'izany rehetra izany dia mampitaha ianao. Ny fitsangantsanganana fiaramanidina mora indrindra indrindra dia ny Mey sy septambra.
Sidina mora mankany Paris
Raha nisafidy ny tantaram-pitiavana ianao dia angamba Paris no toerana tsara indrindra alehanao. Toerana itadiavana toerana mahafinaritra. Mba hahatsiarovanao azy ireo foana fa tsy, satria sidina lafo izany, dia azonao atao ny manomboka manao famandrihana anao manodidina ny 10 herinandro alohan'ny dianao. Ny volana tsara indrindra hahitana an'i Paris dia ny volana septambra sy oktobra.
Sidina mora mankany Roma
Raha tianao izany mitsidika an'i RomaTsy maintsy mamandrika ny tapakilan'ny fiaramanidinao iray volana sy sasany mialoha ihany koa ianao. Amin'izany no ahitanao ny vidiny mirary kokoa. Tadidio koa fa volana Mey sy Jona dia volana lavorary, ambany ny fangatahana.
Sidina toekarena mankany Madrid
Mitadiava a sidina mankany Madrid zavatra mahazatra sy tsotra io. Ny seranam-piaramanidina rehetra dia mifandray aminy. Noho izany, azo antoka fa ho hitanao amin'ny fotoana maro sy tena hafa mihitsy aza. Ny tsara indrindra dia ny manalavitra ireo ora sy andro lehibe toy ny zoma na alatsinainy satria azo antoka fa hiakatra be ny vidiny.
Sidina mora mankany Barcelona
La Barcelona mifandray tsara koa io. Samy manana sidina nasionaly sy iraisam-pirenena. Ka tsy olana ny fandehanana mankany. Indraindray ianao dia hahita dia sasantsasany sy ny fijanonan'izy ireo, fa tsara foana ny manararaotra mijery raha afaka mahangona euro vitsivitsy isika. Misafidiana fotoana iray izay misy fidiranana kely ary ho hitanao ny vidiny mora kokoa noho ny eritreretinao.